ရန်ကုန်ရဲ့ အလှဆုံးဖြစ်လာမယ့် ရူးခါနေအောင်လှတဲ့ အင်းလျားကန်စောင်းက ကော်ဖီဆိုင်ဖြူဖြူလေး
13 Jul 2018 . 2:50 PM
ကောင်မလေးတွေ မပြန်ချင်အောင်ကို ကြွေရတဲ့ ဒီရက်ပိုင်း ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ နာမည်ကြီးကော်ဖီဆိုင်ဖြူဖြူလေးဆီ ရောက်ပြီးသွားကြပြီလား?
ဖွင့်တာ ၆ရက်ပဲရှိသေးတဲ့ ဒီကော်ဖီဆိုင်ကတော့ ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာနေရင်းကို နိုင်ငံခြားကဆိုင်လေးရောက်နေရသလား ထင်မှတ်မှားရစေမယ့် ခံစားချက်ကို ရစေတာ တကယ်ကြီးပါပဲ။
ဒီဆိုင်လေးကိုရောက်သွားရင်တော့ တစ်ဆိုင်လုံးအနံ့ ဖြူဆွတ်နေတဲ့ အလှတရားတွေ၊ စိမ်းစိုနေတဲ့ပန်းခြံကြီးတွေ၊ မြက်ခင်းစိမ်းကြီးတွေ၊ ကန်ဖျားအလှတွေ၊ ရေပန်းတွေနဲ့ ဝန်းရံထားတဲ့ အလှတွေထဲ မမျောသွားမယ့်လူရှိရင် ပြတိုက်မှာသိမ်းထားရတော့မယ်။
အဲ့လောက်ထိအောင်လှလားမေးရင် ဟုတ်ကဲ့ အဲ့လောက်ထိတောင်လှပါတယ်လို့ပဲ ပြောရမှာပဲ။ ဘယ်လောက်တောင်လှလဲ ဘာတွေရလဲဆိုရင်တော့ ဒီမှာ လာပါပြီရှင့်….
အာက်ထပ်ရော၊ အပေါ်ထပ်ရော တစ်ဆိုင်လုံးကို ဖြူဖွေးဆွတ်နေအောင် အလှဆင်ထားပါတယ်။ မီးလုံး အလှလေးတွေ တပ်ထားတယ်။
အပြင်အဆင်က ခမ်းနားတယ်။ ရိုးရှင်းနေအောင် တည်ငြိမ်တယ်။ အောက်ထပ်မှာရော အပေါ်မှာရော အခန်းတွေ က ဘယ်ညာ ၂ခန်း ခွဲထားတယ်။
ချစ်သူလေးတွေ ၂ယောက်တည်း ဒိတ်လို့လှမယ့် Private ခန်းလှလှလေးတွေလည်း ၄ခန်းပါတယ်။
ဒီဆိုင်မှာရတဲ့ အစားအစာကိုတော့ (၃) မျိုးခွဲပြီး ကိုယ့်အကြိုက်အလိုက် မှာချင်သူတွေအတွက် ဈေးလေးတွေ ခွဲပေးပါ့မယ်။
ဆိုင်မှာအဓိကရတာက European Food တွေနဲ့ ကိတ်တွေပါ။ အဲ့ဒီမှာမှ-
ဒါကျတော့ ဒီဆိုင်ရဲ့ ခမ်းနားမှုနဲ့မှမလိုက် အတန့်အတန်ဆုံး မုန့်တွေပါ။ ဈေးနှုန်း ၁၀၀၀ ကနေ ၁၅၀၀, ၂၀၀၀ ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ Croissant တွေ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။
အရမ်းကြိုက်ခဲ့ရတာကတော့ Chicken Cheese Danish ပါ။ ကြက်သားအလွှာလိုက်ကြီးတွေ၊ Cheese တွေထက်ကို Daish ရဲ့ ထောပတ်နံ့မွှေးပြီး ဆိမ့်လွန်းနေတဲ့ ဂျုံသားလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်အရသာက ၁၅၀၀ ပဲပေးရတော့ ဗိုက်မဝမချင်း ဝယ်စားချင်မိတဲ့ထိပါပဲ။
(၂) ကိတ်နဲ့ ကော်ဖီကောင်းကောင်းလေးစားပြီးငြိမ့်ချင်သူတွေအတွက်
ဒါကတော့ ဒုတိယတန်းစားဈေးပါ။ ဈေးအရမ်းမကြီးမသေးအနေအထားပါ။ ကိတ်တွေက တစ်စိတ်ကို ၅၀၀၀ ပါ။
ဒါပေမယ့် အရသာတော်တော်ကောင်းမယ့်အထဲပါပါတယ်။ အရသာစုံအရောင်စုံ၊ ပုံစံစံနဲ့ ချစ်စရာလေးတွေပါ။ ကော်ဖီတွေကတော့ ဈေးနှုန်း ၃၀၀၀ ကစရှိပါတယ်တဲ့။ ခုထိတော့ Drinks Menu မဆွဲရသေးပါဘူး။ မှာသောက်လို့တော့ ရပါတယ်။ Fruit Juice တွေကတော့ ပုံမှန်ပါပဲ။ ညွှန်းရလောက်အောင် မဟုတ်ပါဘူး။
(၃) High Living Luxurious people တွေ အတွက် European Food
သာမန်လူတွေအတွက်တော့ ဒီဆိုင်လာဖို့ စွန့်စားရမယ့်ဈေးလို့ပြောရအောင်ကို ဈေးနည်းနည်းမြင့်ပါတယ်။ ၆၀၀၀ ကစပါတယ်။ ၄၀၀၀၀ ဝန်းကျင်ထိရှိပါတယ်။ ဒီအစားအစာတွေကတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေပိုအကြိုက်တွေ့မှာပါ။
အရသာသိဖို့ European Food ထဲက Carbonara ကို မှာခဲ့တာ တော်တော်ကြီးတဲ့ ပွဲကြီးတစ်ပွဲရပါတယ်။ Cream ရော Cheese ရော၊ Bacon နဲ့ မှိုတွေပါ အကုန်အပိုအလိုမရှိ ကောင်းမှကောင်း ဆိုတဲ့ထဲပါပါတယ်။ စားခဲ့ဖူးသမျှ Hotel တွေက Carbonara တွေထက်ကို ပိုကောင်းတဲ့အရသာပါ။ ၉၀၀၀ ပေးရပါတယ်။
ပေါင်မုန့်အကြီးတွေလည်း အမျိုးစုံရှိပြီး တစ်လုံးကိုမှ ၄၈၀၀ ဝန်းကျင်ပဲရှိပါတယ်။
ကဲ…ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့ ဈေးနှုန်းအနေအထားနဲ့ ကိုယ့်အကြိုက်အလိုက် ရွေးချယ်စားနိုင်ပါပြီ။
မအူမလည်ဖြစ်နေသေးတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရှိသလို အပြုံးတချက်မပျက်ဘဲ ဖော်ရွေလွန်းတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ချမ်းသာခဲ့ရပါတယ်။
ဒါကတော့ Grand Opening မလုပ်ခင်ထိ ဆိုင်မှာလာစားတဲ့သူတိုင်းကို သစ်ရွက်ပုံ Cookieလေးတွေပါတဲ့ Cookie Box လေးတွေ လက်ဆောင်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ ပျော်ပြီပဲပေါ့….နော့။ ဘယ်ချိန်ထိ ပေးမပေးတော့ သေချာမပြောခဲ့ပါဘူး။
လူတိုင်းသိချင်နေတဲ့ဆိုင်နာမည်ကတော့ “White Swan” Tea House and Bakery Restaurant ပါ။
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အလှဆုံးတွေထဲက တစ်နေရာဖြစ်တဲ့ အင်းလျားကန်နောက်မှာ အခြေတည်ထားပါတယ်။
လိပ်စာလေးက အမှတ် (၅) ဦးထွန်းငြိမ်းလမ်း၊ ၁၀ ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ထဲမှာပါ။
မနက် ၁၀ နာရီကနေ ည ၁၁ နာရီထိဖွင့်ပါတယ်။ သွားလို့ အဆင်ပြေဆုံးအချိန်တွေကတော့ မနက် ၁၁ နာရီလောက်နဲ့ ညနေ ၄နာရီလောက်တွေဆိုရင် နေအေးချိန်လေးမို့ အလှဆုံးပါပဲ။
မိုးရွာတဲ့နေ့တွေဆိုရင်တော့ မိုးရွာပြီးစချိန်မှ သွားပါနော်။ အဲ့အချိန်က အရာရာပိုစိမ်းစိုပြီး လှလို့ပါ။
တကယ် လှလွန်းတဲ့အပြင် ဖွင့်ထားတာ ၆ရက်ပဲရှိသေးလို့ လူမသိသေးတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်ပါ။
ဆိုင်ရဲ့နေရာတစ်နေရာမကျန် ဓါတ်ပုံရိုက်လို့ အရမ်းလှတဲ့နေရာပါ။ စိတ်ညစ်သူတွေ ဝရန်တာကနေ မြင်ရတဲ့ အင်းလျားကန်စောင်းမှာ ခုန်ပေါက်မြူးတူးလို့ ကောင်းတဲ့နေရာပါ။
အပင်တွေစိမ်းစိုနေတဲ့ ခြံဝန်းထဲက စံအိမ်လေးတွေထဲ ကြည်နူးလို့အကောင်းဆုံးနေရာပါ။ Croissant တွေ သိပ်ကောင်းတဲ့နေရာပါ။
ကောင်မလေးလက်ကိုဆွဲပြီး ခေါ်သွားဖို့ ပြင်ပါ။ ဓါတ်ပုံဆရာတွေ Photo Model လှလှလေးရှာထားဖို့ပြင်ပါ။ ကောင်မလေးတွေ အဖွဲ့လိုက် Friendship Goal ဖို့ ချိန်ပါ။ ပြီးရင် “White Swan” Tea House and Bakery Restaurant ကို နေသာတဲ့တစ်နေ့ လာဖူးအောင် လာပါ။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ပုန်းကွယ်နေတဲ့ အလှဆုံးကမ္ဘာလေးကို တွေ့ရမှာပါ။
(ဒီလို ဆိုင်နေရာသစ်လေးတွေ ဆိုင်ကောင်းလေးတွေကို ကိုယ်တိုင်ဝယ်စား ကိုယ်တိုင်အဆိုးအကောင်း ဘက်မလိုက်ဘဲ သတင်းစုံလင်အောင်ဝေမျှပြီး အစားချစ်သူတွေထံသတင်းပါးဖို့ ကိုယ့်ပရိသတ်အားတွေလိုတာမို့ Akhayar-Food ကို like လေးလုပ်ထားပြီး ပြန်အားပေးပါဦးရှင့်
ရနျကုနျရဲ့ အလှဆုံးဖွဈလာမယျ့ ရူးခါနအေောငျလှတဲ့ အငျးလြားကနျစောငျးက ကျောဖီဆိုငျဖွူဖွူလေး
ကောငျမလေးတှေ မပွနျခငျြအောငျကို ကွှရေတဲ့ ဒီရကျပိုငျး ရနျကုနျမွို့ရဲ့ နာမညျကွီးကျောဖီဆိုငျဖွူဖွူလေးဆီ ရောကျပွီးသှားကွပွီလား?
ဖှငျ့တာ ၆ရကျပဲရှိသေးတဲ့ ဒီကျောဖီဆိုငျကတော့ ရနျကုနျမွို့ထဲမှာနရေငျးကို နိုငျငံခွားကဆိုငျလေးရောကျနရေသလား ထငျမှတျမှားရစမေယျ့ ခံစားခကျြကို ရစတော တကယျကွီးပါပဲ။
ဒီဆိုငျလေးကိုရောကျသှားရငျတော့ တဈဆိုငျလုံးအနံ့ ဖွူဆှတျနတေဲ့ အလှတရားတှေ၊ စိမျးစိုနတေဲ့ပနျးခွံကွီးတှေ၊ မွကျခငျးစိမျးကွီးတှေ၊ ကနျဖြားအလှတှေ၊ ရပေနျးတှနေဲ့ ဝနျးရံထားတဲ့ အလှတှထေဲ မမြောသှားမယျ့လူရှိရငျ ပွတိုကျမှာသိမျးထားရတော့မယျ။
အဲ့လောကျထိအောငျလှလားမေးရငျ ဟုတျကဲ့ အဲ့လောကျထိတောငျလှပါတယျလို့ပဲ ပွောရမှာပဲ။ ဘယျလောကျတောငျလှလဲ ဘာတှရေလဲဆိုရငျတော့ ဒီမှာ လာပါပွီရှငျ့….
အာကျထပျရော၊ အပျေါထပျရော တဈဆိုငျလုံးကို ဖွူဖှေးဆှတျနအေောငျ အလှဆငျထားပါတယျ။ မီးလုံး အလှလေးတှေ တပျထားတယျ။
အပွငျအဆငျက ခမျးနားတယျ။ ရိုးရှငျးနအေောငျ တညျငွိမျတယျ။ အောကျထပျမှာရော အပျေါမှာရော အခနျးတှေ က ဘယျညာ ၂ခနျး ခှဲထားတယျ။
ခဈြသူလေးတှေ ၂ယောကျတညျး ဒိတျလို့လှမယျ့ Private ခနျးလှလှလေးတှလေညျး ၄ခနျးပါတယျ။
ဒီဆိုငျမှာရတဲ့ အစားအစာကိုတော့ (၃) မြိုးခှဲပွီး ကိုယျ့အကွိုကျအလိုကျ မှာခငျြသူတှအေတှကျ ဈေးလေးတှေ ခှဲပေးပါ့မယျ။
ဆိုငျမှာအဓိကရတာက European Food တှနေဲ့ ကိတျတှပေါ။ အဲ့ဒီမှာမှ-
ဒါကတြော့ ဒီဆိုငျရဲ့ ခမျးနားမှုနဲ့မှမလိုကျ အတနျ့အတနျဆုံး မုနျ့တှပေါ။ ဈေးနှုနျး ၁၀၀၀ ကနေ ၁၅၀၀, ၂၀၀၀ ဝနျးကငျြရှိပါတယျ။ Croissant တှေ တျောတျောကောငျးပါတယျ။
အရမျးကွိုကျခဲ့ရတာကတော့ Chicken Cheese Danish ပါ။ ကွကျသားအလှာလိုကျကွီးတှေ၊ Cheese တှထေကျကို Daish ရဲ့ ထောပတျနံ့မှေးပွီး ဆိမျ့လှနျးနတေဲ့ ဂြုံသားလတျလတျဆတျဆတျအရသာက ၁၅၀၀ ပဲပေးရတော့ ဗိုကျမဝမခငျြး ဝယျစားခငျြမိတဲ့ထိပါပဲ။
(၂) ကိတျနဲ့ ကျောဖီကောငျးကောငျးလေးစားပွီးငွိမျ့ခငျြသူတှအေတှကျ
ဒါကတော့ ဒုတိယတနျးစားဈေးပါ။ ဈေးအရမျးမကွီးမသေးအနအေထားပါ။ ကိတျတှကေ တဈစိတျကို ၅၀၀၀ ပါ။
ဒါပမေယျ့ အရသာတျောတျောကောငျးမယျ့အထဲပါပါတယျ။ အရသာစုံအရောငျစုံ၊ ပုံစံစံနဲ့ ခဈြစရာလေးတှပေါ။ ကျောဖီတှကေတော့ ဈေးနှုနျး ၃၀၀၀ ကစရှိပါတယျတဲ့။ ခုထိတော့ Drinks Menu မဆှဲရသေးပါဘူး။ မှာသောကျလို့တော့ ရပါတယျ။ Fruit Juice တှကေတော့ ပုံမှနျပါပဲ။ ညှနျးရလောကျအောငျ မဟုတျပါဘူး။
(၃) High Living Luxurious people တှေ အတှကျ European Food
သာမနျလူတှအေတှကျတော့ ဒီဆိုငျလာဖို့ စှနျ့စားရမယျ့ဈေးလို့ပွောရအောငျကို ဈေးနညျးနညျးမွငျ့ပါတယျ။ ၆၀၀၀ ကစပါတယျ။ ၄၀၀၀၀ ဝနျးကငျြထိရှိပါတယျ။ ဒီအစားအစာတှကေတော့ နိုငျငံခွားသားတှပေိုအကွိုကျတှမှေ့ာပါ။
အရသာသိဖို့ European Food ထဲက Carbonara ကို မှာခဲ့တာ တျောတျောကွီးတဲ့ ပှဲကွီးတဈပှဲရပါတယျ။ Cream ရော Cheese ရော၊ Bacon နဲ့ မှိုတှပေါ အကုနျအပိုအလိုမရှိ ကောငျးမှကောငျး ဆိုတဲ့ထဲပါပါတယျ။ စားခဲ့ဖူးသမြှ Hotel တှကေ Carbonara တှထေကျကို ပိုကောငျးတဲ့အရသာပါ။ ၉၀၀၀ ပေးရပါတယျ။
ပေါငျမုနျ့အကွီးတှလေညျး အမြိုးစုံရှိပွီး တဈလုံးကိုမှ ၄၈၀၀ ဝနျးကငျြပဲရှိပါတယျ။
ကဲ…ကိုယျအဆငျပွတေဲ့ ဈေးနှုနျးအနအေထားနဲ့ ကိုယျ့အကွိုကျအလိုကျ ရှေးခယျြစားနိုငျပါပွီ။
မအူမလညျဖွဈနသေေးတဲ့ ဝနျထမျးတှရှေိသလို အပွုံးတခကျြမပကျြဘဲ ဖျောရှလှေနျးတဲ့ ဝနျထမျးတှလေညျး ရှိပါတယျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ စိတျခမျြးသာခဲ့ရပါတယျ။
ဒါကတော့ Grand Opening မလုပျခငျထိ ဆိုငျမှာလာစားတဲ့သူတိုငျးကို သဈရှကျပုံ Cookieလေးတှပေါတဲ့ Cookie Box လေးတှေ လကျဆောငျပေးနတေယျဆိုတော့ ပြျောပွီပဲပေါ့….နော့။ ဘယျခြိနျထိ ပေးမပေးတော့ သခြောမပွောခဲ့ပါဘူး။
လူတိုငျးသိခငျြနတေဲ့ဆိုငျနာမညျကတော့ “White Swan” Tea House and Bakery Restaurant ပါ။
ရနျကုနျမွို့ရဲ့ အလှဆုံးတှထေဲက တဈနရောဖွဈတဲ့ အငျးလြားကနျနောကျမှာ အခွတေညျထားပါတယျ။
လိပျစာလေးက အမှတျ (၅) ဦးထှနျးငွိမျးလမျး၊ ၁၀ ရပျကှကျ၊ မရမျးကုနျးမွို့နယျထဲမှာပါ။
မနကျ ၁၀ နာရီကနေ ည ၁၁ နာရီထိဖှငျ့ပါတယျ။ သှားလို့ အဆငျပွဆေုံးအခြိနျတှကေတော့ မနကျ ၁၁ နာရီလောကျနဲ့ ညနေ ၄နာရီလောကျတှဆေိုရငျ နအေေးခြိနျလေးမို့ အလှဆုံးပါပဲ။
မိုးရှာတဲ့နတှေ့ဆေိုရငျတော့ မိုးရှာပွီးစခြိနျမှ သှားပါနျော။ အဲ့အခြိနျက အရာရာပိုစိမျးစိုပွီး လှလို့ပါ။
တကယျ လှလှနျးတဲ့အပွငျ ဖှငျ့ထားတာ ၆ရကျပဲရှိသေးလို့ လူမသိသေးတဲ့ ကျောဖီဆိုငျပါ။
ဆိုငျရဲ့နရောတဈနရောမကနျြ ဓါတျပုံရိုကျလို့ အရမျးလှတဲ့နရောပါ။ စိတျညဈသူတှေ ဝရနျတာကနေ မွငျရတဲ့ အငျးလြားကနျစောငျးမှာ ခုနျပေါကျမွူးတူးလို့ ကောငျးတဲ့နရောပါ။
အပငျတှစေိမျးစိုနတေဲ့ ခွံဝနျးထဲက စံအိမျလေးတှထေဲ ကွညျနူးလို့အကောငျးဆုံးနရောပါ။ Croissant တှေ သိပျကောငျးတဲ့နရောပါ။
ကောငျမလေးလကျကိုဆှဲပွီး ချေါသှားဖို့ ပွငျပါ။ ဓါတျပုံဆရာတှေ Photo Model လှလှလေးရှာထားဖို့ပွငျပါ။ ကောငျမလေးတှေ အဖှဲ့လိုကျ Friendship Goal ဖို့ ခြိနျပါ။ ပွီးရငျ “White Swan” Tea House and Bakery Restaurant ကို နသောတဲ့တဈနေ့ လာဖူးအောငျ လာပါ။ ရနျကုနျမွို့ရဲ့ ပုနျးကှယျနတေဲ့ အလှဆုံးကမ်ဘာလေးကို တှရေ့မှာပါ။
(ဒီလို ဆိုငျနရောသဈလေးတှေ ဆိုငျကောငျးလေးတှကေို ကိုယျတိုငျဝယျစား ကိုယျတိုငျအဆိုးအကောငျး ဘကျမလိုကျဘဲ သတငျးစုံလငျအောငျဝမြှေပွီး အစားခဈြသူတှထေံသတငျးပါးဖို့ ကိုယျ့ပရိသတျအားတှလေိုတာမို့ Akhayar-Food ကို like လေးလုပျထားပွီး ပွနျအားပေးပါဦးရှငျ့